April 2012 ~ Rohingya Blogger
မြန်မာအစိုးရက ကချင်စစ်ဆင်ရေးတွင် ရဟတ်ယာဉ် အသုံးပြုလာ
ပန်းဝါမြို့ မြန်မာအစိုးရတပ်က စစ် ရဟတ်ယာဉ် (၈) စင်းဖြင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) အား ကချင်ပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း နှစ်နေရာတွင် ဧပြီ ၂၈၊ စနေနေ့က တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ရှေ့တန်း KIA သတင်းက ဆိုသည်။ ရဟတ်ယာဉ် ၂ စင်းက ယခု မြန်မာ့တပ်မတော် နယ်ခြားစောင့်တပ် တပ်ရင်း အမှတ် ၁၀၀၁ အခြေစိုက်ထားသော (ယခင် ကချင်ဒီမိုကရေစီသစ်တပ်မတော် (NDA-K) ဌာနချုပ်) ပန်ဝါမြို့ကို ၀ိုင်းထားသည့် KIA တပ်ဖွဲ့များကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု KIA အရာရှိများဆိုသည်။ တချိန်ထဲမှာ ကျန် ရဟတ်ယာဉ် (၆) စင်းက ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် ကန်ပိုင်တီလမ်း ဆဒုံမြို့နယ်ခွဲရှိ KIA တပ်ရင်း ၃ အောက် ပန်ဆဲစခန်းအပါဝင် အခြားအမာခံစခန်းများကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု တပ်ရင်း ၃ အရာရှိများ ကချင်သတင်းဌာနသို့ အတည်ပြုသည်။ မြန်မာ့တပ်မတော် စစ် ရဟတ်ယာဉ်များ ယခုလို KIA ပစ်မှတ်များကို တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် မြစ်ကြီးနားမြို့ မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (မပခ)ဘက်သို့ ပြန်လှည့်သွားကြသည်ဟု မျက်မြင်များဆိုသည်။ ဧပြီ ၂၆ ရက်မှစပြီး ကန်ပိုင်တီနှင့် ပန်ဝါ တရုတ်နယ်စပ်လမ်းဘက်တွင် အစိုးရနှင့် KIA ကြား တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်လာသည်။ ယနေ့ထိ နှစ်ဖက်တပ်ကြား ချီဖွေနှင့် ပန်ဝါကြား တိုက်ပွဲများဖြစ်နေသည်မှာ ၄ ရက် ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ Source : KNG Read More
မြန်မာအစိုးရဟာ ပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့ ပိတ်ဆို့ ပြစ်ဒဏ်ခတ်ထားတာကို ထောက်ပြ ဝေဖန်လေ့ရှိပေမယ့် အစိုးရကိုယ်တိုင်က မြန်မာပြည်သူတွေကို ပိတ်ဆို့ အရေးယူထားကြောင်း ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးက ဒီကနေ့ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းက တေးဂီတပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြုလုပ်သော HIV ဝေဒနာသည်များအတွက် ရန်ပုံငွေရှာပွဲတွင် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်သည့် မင်းကိုနိုင် (၀ဲ)နှင့် ကိုကိုကြီး (ယာ) တို့ကို တွေ့ရစဉ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်နေတဲ့ ဂျာမန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Guido Westerwelle က နိုင်ငံရေးနဲ့ လူထုအဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ Chatrium Hotel မှာ ဖိတ်ကြားဆွေးနွေးချိန် အဲဒီလို ပြောကြားလိုက်တာပါလို့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
ဂျာမဏီနိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍအလိုက် အကူအညီတွေ ပေးသွားဖို့ ရှိတယ်လို့ ဂျာမန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးက ပြောကြောင်း ကိုကိုကြီးက ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံပေါ် ပိတ်ဆို့မှုတွေ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းရေးဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဘယ်လောက်မြန်ဆန်အောင် လုပ်မလဲ ဆိုတဲ့ပေါ်မှာ မူတည်ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားအဖွဲ့က သုံးသပ်တယ်လို့ ကိုကိုကြီးက ပြောပါတယ်။
ဂျာမန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီ NDF ခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်ဆွေ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးနဲ့ အခြားသူတွေလည်း တက်ရောက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
မြန်မာပြည်အနာဂတ်အတွက် ပိတ်ဆို့​မှုများ​ရပ်ရန် ဘန်ကီမွန်း​တောင်း​ဆို
ဘန်ကီမွန်းနှင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိ​နေတဲ့​ကုလသမဂ္ဂအတွင်း​ရေး​မှူး​ချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း​ဟာ လတ်တ​လော မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပေါ်​ပေါက်​နေတဲ့​ဒီမိုက​ရေစီ​ရေး​ပြုပြင်​ပြောင်း​လဲမှု​တွေကို ကြိုဆို​ကြောင်း​နဲ့​စီး​ပွား​ရေး​ပိတ်ဆို့​မှု​တွေ ရပ်ဖို့​နိ်ုင်ငံတကာကို တောင်း​ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒီ​နေ့​နေပြည်​တော် ပြည်သူ့​လွှတ်​တော်မှာ မြန်မာလွှတ်​တော်အမတ်​တွေကို နိုင်ငံတကာ ဧည့်​သည်တဦး​အဖြစ် ပထမဆုံး​အကြိမ် မိန့်​ခွန်း​ပြောကြား​ရာမှာ ထည့်​သွင်း​ပြောကြား​ခဲ့​တာပါ။
အတွင်း​ရေး​မှူး​ချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်း​က “သိသာထင်ရှား​တဲ့​အ​ပြောင်း​အလဲ​တွေနဲ့​မြန်မာဟာ ကမ္ဘာရဲ့​စိတ်ဝင်စား​မှုကို သိမ်း​ကျုံး​ရယူ​နေပါတယ်။ တိုင်း​ပြည်ရဲ့​အနာဂတ်မြင့်​မား​စေဖို့​ရည်မှန်း​ချက်ဆန္ဒ အရမ်း​ကို ပြင်း​ပြ​နေတယ်ဆိုတာ ကျ​နော်တို့​သိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာ အသိုင်း​အဝန်း​က လေး​စား​ရမယ့်​၊​တာဝန်ယူတတ်တဲ့​နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ် အလျင်အမြန် ပြန်လည်​ရောက်ရှိမယ်ဆိုတာ သံသယမရှိပါဘူး​”လို့​ပြောပါတယ်။
ဒါ့​အပြင် မြန်မာနိုင်ငံအ​ပေါ် ပိတ်ဆို့​ဒဏ်ခတ်အ​ရေး​ယူထား​မှု​တွေကို ရုပ်သိမ်း​ပေး​ဖို့​လည်း​ကုလသမဂ္ဂအတွင်း​ရေး​မှူး​ချုပ်က တောင်း​ဆိုလိုက်ပါတယ်။
“ကုန်သွယ်​ရေး​အကန့်​အသတ်​တွေနဲ့​တခြား​ပိတ်ဆို့​ဒဏ်ခတ်မှု​တွေကို ပိုမိုပြီး​ရုပ်သိမ်း​ဖို့​၊​ဆိုင်း​ငံ့​ထား​ပေး​ဖို့​ဒါမှမဟုတ် ဖျက်သိမ်း​ပစ်ဖို့​နိုင်ငံတကာ အသိုင်း​အဝန်း​ကို ကျ​နော် တောင်း​ဆိုပါတယ်။ ဒုတိယအချက်အ​နေနဲ့​မြန်မာမှာ နိုင်ငံတကာရဲ့​ဖွံ့​ဖြိုး​ရေး​အကူအညီ​တွေနဲ့​နိ်ုင်ငံခြား​တိုက်ရိုက်ရင်း​နှီး​မြှုပ်နှံမှု​တွေလည်း​စဉ်ဆက်မပြတ် တိုး​လာဖို့​လိုအပ်​နေပါတယ်။”
မစ္စတာဘန်ကီမွန်း​ဟာ ဧပြီ ၂၉ ရက်​နေ့​ကတည်း​က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၃ ရက်တာ ခရီး​ရောက်ရှိ​နေတာဖြစ်ပြီး​နေပြည်​တော်မှာ သမ္မတ ဦး​သိန်း​စိန်အပါအဝင် လွှတ်​တော် အကြီး​အကဲ​တွေနဲ့​လည်း​တွေ့​ဆုံခဲ့​ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်​ပေါင်း​၃၀ ကျော်အတွင်း​ပြည်လုံး​ကျွတ် သန်း​ခေါင်စာရင်း​ပြန်​ကောက်မယ့်​အစီအစဉ်မှာ ကုလသမဂ္ဂက ငွေ​ကြေး​နဲ့​နည်း​ပညာပိုင်း​ဆိုင်ရာ အကူအညီ​ပေး​မယ့်​သ​ဘောတူညီချက်တရပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်း​နဲ့​ဒု-သမ္မတ စိုင်း​မောက်ခမ်း​တို့​ရှေ့​မှောက်မှာ သ​ဘောတူ လက်မှတ်​ရေး​ထိုး​မှု​တွေ ပြုလုပ်ခဲ့​ပါတယ်။
မစ္စတာဘန်ကီမွန်း​ဟာ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ် ခေါင်း​ဆောင် ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်နဲ့​လည်း​တွေ့​ဆုံဖို့​ရှိပြီး​ရန်ကုန်မှာ ကျင်း​ပမယ့်​စီး​ပွား​ရေး​ဆိုင်ရာ အစည်း​အ​ဝေး​ကိုလည်း​တက်​ရောက်ဖို့​ရှိ​နေပါတယ်။
Source: ပီတာအောင် - ဒီဗွီဘီ
Photo: Reuters U.N. estimates indicate nearly one million ethnic Rohingya Muslims live in Burma's Rakhine State. A 1982 Burmese law denied Rohingyas citizenship, forcing the flight of many, like these stateless refugees in Cox's Bazar, Bangladesh, Aug. 2011 (file photo). Burma plans to conduct its first census in 31 years,akey step in political reforms that could haveabig impact on the country’s marginalized minorities.Burma's minister of immigration and population Khin Yi signedaletter confirming his government's commitment to conduct the nationwide census by 2014. The letter says the first survey in 31 years will adhere to global standards, include "all national races," and give census workers access to all areas of the country.
During the signing ceremony in Naypyitaw, U.N. Secretary General Ban-Ki Moon said he hopes ongoing ceasefire talks will make the census possible, and will involve minorities and civil society.
Dave Mathieson, senior Burma researcher for Human Rights Watch, said an accurate count of the population isacritical part of the government’s political reforms. "Potentially, if you haveacensus that extends the right to vote to everyone in the country, you are going to haveafar more equal and credible election in 2015," said Mathieson. "If you have actually empowered people enough that they can actually cast votes."
Burma’s last official census in 1983 failed to count people living in areas where insurgencies were raging. Before that, the last credible census was conducted in 1931, during British rule. Official denial of the stateless
Rights groups worry that if not conducted properly, the census could marginalize minorities such as the Rohingya or those living in one of Burma's many conflict areas.
The United Nations estimates nearly one-million ethnic Rohingya Muslims live in Rakhine State.
Myint Kyaing, Director General of Burma's Department of Population, an office which denies the existence of stateless people, is responsible for conducting the survey. "We have no stateless people in Myanmar and there is no Rohingya in Myanmar as well, because no Bengali people are residing in Myanmar," he said. A key test Analysts say resolving such classification disputes will beakey test of the census’ accuracy and the government’s commitment to reform.
For years, economists and academics studying Burma have been forced to use the government's notoriously unreliable data.
Professor Sean Turnell of Australia's Maquarie University, editor of Burma Economics Watch, said the census will allow the government to more accurately estimate key economic indicators such as GDP.
"Under the previous government there was very little, even in pretense, about having the numbers right," said Turnell. "You know there were certain objectives that the government wanted to achieve and, when pressed, those numbers usually added up to achieving those ends. And so I think the classic example was GDP growth rates, which for decades were in double digits."
Those GDP rates, he added, would have made Burma the best performing economy in the world.
In the two years leading up to the data-collection period, the United Nations Population Fund (UNFPA) will be assisting in surveyor training and drafting survey documents. UNFPA's country representative Mohamed Abdel-Ahad called it an especially steep challenge due to the amount of time elapsed since the last census, but one that isacritical step.
"As you know the public does not know enough about the census," he said. "The census has not been taken for 30 years, so those who were born after 1983 in Myanmar do not know and have not gone through the experience of conducting census, and we need to inform them that it is their right to be counted."
Abdel-Ahad said workers expect to carry out the census in April, 2014. The United Nations is expected to at least partially cover the estimated $53-million cost. VOA Burmese Read More
ဘန်ကီမွန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် မိန့်ခွန်းပြောကြား
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၌ ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် (Photo: AFP)
အဖွဲ့အစည်းများကြားတွင် မတူကွဲပြားမှုများ ရှိကြသည်ဆိုသည်မှာ ထူးဆန်းသည့် ကိစ္စမဟုတ်ကြောင်း ထိုသို့ မတူကွဲကွဲပြားမှုများသည် ကြီးမားနိုင်သလို အသေးအမွှားလည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ၊ ယခု ကျမ်းသစ္စာကျိမ်ဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စနှင့်တူကြောင်း ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဘန်ကီမွန်က ယနေ့ လွှတ်တော်၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားရာ၌ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်ဟု Eleven Media Group - Facebook အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင်ရေးသားဖော်ပြထားသည်။ Read More
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရပြီး ဖြစ်သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရွေးကောက်ခံ NLD အမတ်များ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် NLD ရုံးချုပ်၌ ပြုလုပ်သော မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောကြားလိုက်သည်။ “အလျှော့ပေး လိုက်တာလားလို့ မေးရင် ဟုတ်ပါတယ်။ အလျှော့ပေးလိုက်တာပါ။ ပြည်သူ့ဆန္ဒအတွက်ပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လာမည့် မေလ ၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ တက်ရောက်ဖွယ် ရှိကြောင်း မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး စောင့်ကြည့် လေ့လာနေသူများက ခန့်မှန်းပြောဆိုသည်။
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိထားသော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD ပါတီင်္ဝင် အနိုင်ရ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များမှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ကျမ်းသစ္စာဆို စာပိုဒ်ပါ စာသားကို ပြင်ဆင်မှသာ လွှတ်တော် တက်မည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသည်။ The Voice Weekly
မေလ ၂ ရက်တွင် NLD လွှတ်တော်တက်မည်
ပြည်သူများနှင့် ဒီမိုကရေစီ ပါတီ များ၏ လိုလားချက် အရ NLD ပါတီ အနေဖြင့် လွှတ်တော်သို့ မေလ ၂ ရက် တွင် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပြီး တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း NLD ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က
ယနေ့ ၁၀ နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးအပြီးတွင် မီဒီယာများသို့ပြောကြားလိုက်ကြောင်း Yangon Media Group အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ သတင်းရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။ပြည်သူ့များ၏ ဆန္ဒအရ လွှတ်တော်တက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယနေ့တွင် ပြောဆိုလိုက်ကြောင်း၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ မေလ ၂ ရက်နေ့တွင် ကျမ်းသစ္စာကျိမ်ဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်ဟု Eleven Media Group - facebook အင်တာနက်စာမျက်နှာလည်း ရေးသားထားပါသည်။************************************************************************************************* `ဧရာဝတီ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD)ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် က ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒနှင့် တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ်ပါတီများ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်အား အလေးထားသောအားဖြင့် ကျမ်းကျိန်လွှာကို ပြင်ဆင်ပေးခြင်း မရှိသော်လည်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် မေ၂ ရက်နေ့တွင် ကျမ်းကျိန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ပြောဆိုလိုက်သည်။ရန်ကုန်မြို့ရှိ NLD ရုံးချုပ်တွင် ကျင်းပသော ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးအပြီး ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ထိုသို့ ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့စဉ် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီဥပဒေများ ပြင်ဆင်ရန် ပြောဆိုသည့်အခါ ကျမ်းကျိန်လွှာ ကိစ္စကို လစ်ဟင်းသွားခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းသို့ လစ်ဟင်းမှုကို မိမိ တာဝန်ယူကြောင်း၊ လစ်ဟင်းမှုကြောင့် ပြည်သူများ၏ဆန္ဒနှင့်
တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ်ပါတီများ၏ ဆန္ဒကို မထိပါးလိုကြောင်းလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရှင်းပြသည်။
NLD သည် ကျမ်းကျိန်လွှာကိစ္စကို နိုင်ငံရေးပြဿနာအဖြစ် တွန်းမပို့ဘဲ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာအဖြစ်သာ ကိုင်တွယ်ရှုမြင်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် နိုင်ငံရေးသဘောထားကြီးစွာဖြင့် အပေးအယူလုပ်ခြင်းကိုလည်း လက်တွေ့ပြသသည့် အနေနှင့် ယခုကဲ့သို့ ကျမ်း ကျိန်လွှာကိစ္စကို အလျှော့ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
EU halts sanctions but little relief for exporters
Volume 32, No. 624
EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Catherine Ashton talks to the press in Luxembourg on April 23. Pic: AFP
BUSINESS leaders have welcomed the European Union’s decision to suspend sanctions but urged the reinstatement of trade preferences to assist the country’s job-creating export industries.
The EU’s Foreign Affairs Council announced the widely anticipated suspension atameeting in Luxembourg on April 23, saying the move was intended to encourage the reform process. Only an arms embargo will remain in place.
The bloc’s High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Catherine Ashton said inastatement that the Foreign Affairs Council “tookadecision to openanew chapter in our relations”.
The council “welcomed the truly remarkable changes we have seen in the country in recent months, including the by-elections, the release of some of the political prisoners and efforts that are being made for national reconciliation”, she said.
While the council also supports reinstating the Generalised System of Preferences, which would reduce tariffs on Myanmar’s exports to the EU, as soon as possible, it could only do so following an assessment by the International Labour Organisation, she said.
U Aung Lwin,avice president of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI), told The Myanmar Time last week that the sanctions suspension wasa“very positive step” for encouraging economic development in Myanmar.
“Asaprimary move the EU suspended sanctions on Myanmar but after the assessment of the ILO they may [reintroduce] GSP for Myanmar. The suspension of sanctions isavery positive step for future economic development in Myanmar,” U Aung Lwin said.
He said European companies interested in investing in Myanmar would face stiff competition from their counterparts from Japan, China, Vietnam, South Korea and Thailand.
“We are very busy with business delegations from different countries. They are interested in almost every sector,” he said.
U Myint Soe, chairman of Myanmar Garment Manufacturers Association, said the suspension of EU sanctions would havea“huge impact on economic development” once the GSP suspension was lifted.
“After the GSP suspension is lifted we will have more business opportunities in Myanmar,” he said.
Economist Dr Maung Aung said the move would open up another export market to Myanmar businesses and encourage greater investment from European firms, even in sectors that have not been subject to EU sanctions.
“Before we exported our products mainly to regional countries but the suspension of the EU sanctions will open up Myanmar’s export products, such as forestry … and gems, to European countries. It means we now have new markets to export these products,” he said.
“The EU sanctions on Myanmar blocked the investment opportunities … the suspension of sanctions will also attract more investors from EU countries to Myanmar.”
Ms Ashton, who was due to visit Myanmar from April 28 to 30, said the EU wanted to see the government take further steps, including the release of remaining political prisoners and the removal of all restrictions placed on those already released.
The council also raised concerns about ongoing conflict with armed ethnic groups, access to Kachin State for humanitarian organisations and the status and welfare of the Rohingya group. “Of course reforms in that country need to continue – we need to see further progress, in particular the unconditional release of all political prisoners and efforts to end ethnic conflicts,” Ms Ashton said in the statement.
She said the EU had announcedasignificant increase in funding for Myanmar targeting economic and social development, democratic transformation and the strengthening of civil society and government capacity.
“We are ready to assist with these efforts as well as with economic and social development. We have 150 million euros (about US$200 million), half of which is new money. Over the course of the next few months we’ll see about 100 million euros ($133 million) available for health, for education, alleviation of poverty, support for civil society and so on,” she said.
“We will continue to support the democratic transition, including through electoral assistance and we are encouraging trade and investment in the country.”
British Prime Minister David Cameron said inastatement that it was “right for the world to respond” to positive changes in Myanmar.
“President Thein Sein has taken important steps towards reform in Burma,” he said, according to AFP. “But those changes are not yet irreversible, which is why it is right to suspend rather than lift sanctions for good.”
While sanctions could be reinstated in one year, Derek Tonkin, chairman of the non-profit Network Myanmar, said it was unlikely.
“To reinstate EU sanctions would require the unanimous consent of all 27 EU members,” he said inastatement. “Without the support of all EU members, sanctions would remain suspended.”
He also said the Foreign Affairs Council had “dodged” the GSP issue in its statement. “The withdrawal of GSP primarily affected export sectors like garments and seafood from private, non-crony enterprises where there is no forced labour and for that reason withdrawal should not have been imposed in the first place.”
မြန်မာမွတ်စလင်များ၏ သာသနာရေးဆိုင်ရာနှင့် အိုးအိမ်များ အဖျက်ဆီးခံရမှုအပေါ် ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ခြင်း
၁။ အမိမြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်ရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုများ တိုးတက်လာမှုကြောင့် တိုင်းရင်းသားများပေါင်းစုံ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူများက မျှော်လင့်ချက်ထား ဝမ်းသာအားရဖြစ်နေရသော ယခုလို အချိန်အခါမျိုးတွင် ကျောက်ပန်းတောင်း၊ ဆိုင်းတောင်(ကချင်ပြည်နယ်)နှင့် ကံမမြို့များတွင် မြန်မာမွတ်စလင်များ၏ သာသနာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများနှင့် အိုးအိမ်များကို ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဆန်ဆန် လူစုလူဝေးဖြင့် ဥပဒေမဲ့ တရားလက်လွတ် အနိုင့်အထက် ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းများကို မြန်မာမွတ်စလင် အစည်းအရုံးက ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်လိုက်သည်။ ၂။ ရှေးမြန်မာမင်းများခေတ်၊ ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ရေးခေတ်နှင့် လွတ်လပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတော်ခေတ်များတွင် တိုင်းရင်းသားများအဖြစ် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုခံထားသော သမိုင်းအထောက်အထား အထင်အရှားရှိသည့်အပြင် မူလဘူတ မြန်မာ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုး (၁၄၄)မျိုးစာရင်းဝင် မြန်မာမွတ်စလင်များကို ဧည့်သည်များ၊ နိုင်ငံခြားသား ကုလားများအဖြစ်၎င်း၊ မြန်မာပြည်၏ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ မှန်သမျှတွင် နိုင်ငံတော်၏ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတစ်ခုအဖြစ် အစဉ်ထည့်သွင်း အသိအမှတ်ပြုခံရသော အစ္စလာမ်သာသနာကို နိုင်ငံခြားဘာသာ၊ ဧည့်သည်ဘာသာအဖြစ်၎င်း၊ အခြေအမြစ်မဲ့ ဗရမ်းဗတာ ပြောဆိုရေးသား၊ ဝါဒဖြန့်နေခြင်းများကိုလည်း ပြင်းထန်စွာ ရှုံ့ချလိုက်သည်။ ၃။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အာရှမှာ ဂျပန်ကလွဲလျှင် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု အလားအလာ အကောင်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် ကုလသမဂ္ဂမှ အသိအမှတ်ပြုခဲ့သော်လည်း ကိုယ့်နိုင်ငံသားအချင်းချင်း တိုက်ခိုက်နေကြသော အနှစ်(၆၀)ကျော် ပြည်တွင်း ပဋိပက္ခပေါင်းစုံကြောင့် ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံအဖြစ်သို့ ကျဆင်းခဲ့ရသည်။ အဖက်ဖက်မှ အောက်ကျ နောက်ကျဖြစ်နေသော အမိနိုင်ငံတော်ကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့် ပြန်လည် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ရေးအတွက် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ညီညီညွတ်ညွတ် ထူထောင်ကြရန် ရှားရှားပါးပါး အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာသည့် ယခုလို ကာလမျိုးတွင်ပင် ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ရာ အတိတ်က အဖြစ်ဆိုးများကို သင်္ခန်းစာ မယူနိုင်သေးဘဲ ကိုယ့်ပြည်တွင်းရှိ စွမ်းအားစုများ (Resources)ကို အလဟသ ပြုန်းတီးစေသော ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများကို အသစ်တစ်ဖန် ဖန်တီးနေခြင်းသည် အင်မတန်မှ အမျှော်အမြင် နည်းပါးရာ ကျလှပေသည်။ ၃။ ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းရင်းသားမြန်မာမွတ်စလင်များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များကို အထူးလေးစား ကြည်ညိုသူများဖြစ်ကြသကဲ့သို့ မိမိတို့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာ အစ္စလာမ်သာသနာကို အေးချမ်းစွာ ကျင့်သုံးနေလိုသူများဖြစ်သည်။ မိမိတို့သည် ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းများ ဖန်တီးလိုသူ အစွန်းရောက်များ စွပ်စွဲသကဲ့သို့ အစ္စလာမ်သာသနာကို မတော်မတရား လွှမ်းမိုးဖြန့်ချိလိုသူများ မဟုတ်သလို၊ မြန်မာပြည်သူအများစု ကိုးကွယ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အထူးဝိသေသများကိုလည်း လေးစား အသိအမှတ်ပြုသူများဖြစ်သည်။ ၄။ ထို့ကြောင့် တိုင်းပြည်အေးချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ လူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေး၊ အပြန်အလှန် ချစ်ကြည်လေးစားရေးတို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာမွတ်စလင်များသည် ဆရာတော် သံဃာတော်များ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ပြည်သူလူထုများနှင့် ဆတက်ထမ်းပိုးတိုး၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်၏။ မြန်မာမွတ်စလင် အစည်းအရုံး ဧပြီလ (၂၉)၊ ၂၀၁၂ Media Contact; ကိုကျော်စွာ +44 782 842 6801(UK) kyawzwa@b-m-a.org; ဒေါ်မော်လီ +1 306 242 4536 Canada law4women@gmail.com; Ma Yasmin +1 408 250 6227(USA) yasnohana@sbcglobal.net; Read More
စီးပွားရေးဆိုက်ရောက် ဗီဇာကို ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ပေးမည်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည့် နိုင်ငံခြားသားများ အနေဖြင့် လာမည့် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ စီးပွားရေး ဆိုက်ရောက်ဗီဇာရယူနိုင်မည်ဟု လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာန ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီက ယနေ့နေ့လည်ပိုင်း သတင်းမီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ပြောဆိုလိုက်သည်။ ယင်းဗီဇာ ထုတ်ပေးရာတွင် ဗီဇာကြေးမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၀ ကျသင့်မည်ဖြစ်၍ ရက်ပေါင်း ၇၀ နေထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ဟု ဦးခင်ရီက ရှင်းလင်းပြောဆိုသွားသည်။ စီးပွားရေး ဗီဇာဟု ဆိုသော်လည်း သတင်းမီဒီယာ သမားများလည်း ယင်းဗီဇာဖြင့် လာရောက်နိုင်ကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောသည်။ ယမန်နှစ် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တာဝန်ယူပြီးနောက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် ပြည်ပခရီးသွားဝင်ရောက်မှု သိသိသာသာ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ယခုနှစ် ပြည်ပခရီးသွားဝင်ရောက်နှုန်းမှာ ယခင်နှစ်ထက် ၁၀ ခန့်တိုးမြှင့်လာကြောင်းလည်း ပြည်ပခရီးသွားဝင်ရောက်မှု နှင့် ပတ်သက်၍ ဦးခင်ရီက ယနေ့ ပြောဆိုသွားသည်။ ထိုသို့ ပြည်ပခရီးသွားဝင်ရောက်မှု မြင့်တက်လာသည့် အချိန်တွင် ယခုလို ဗီဇာထုတ်ပေးမှုဆိုင်ရာ ဖြေလျှော့မှု ထပ်မံဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ။ Source :-ကျော်စိုးလင်း (YPI) Read More
မြန်မာနိုင်ငံရောက် ဘန်ကီမွန်း ဦးသန့်ဗိမာန်သို့ သွားရောက်ဂါရ၀ပြု
ဘန်ကီမွန်းကို ဦးသန့်၏ သမီးဒေါ်အေးအေးသန့်နှင့် သူမ၏ အမျိုးသားတို့ကကြိုဆိုစဉ်။(photo - 7Daw News) မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေသော ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက ယနေ့(ဧပြီ ၂၉)ရက် ညနေ ၃ နာရီ ၅၀မိနစ်ဝန်းကျင်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်၏ဂုဗိမာန်သို့လာရောက် ဂါရ၀ပြုခဲ့သည်။ ဘန်ကီမွန်းကို ဦးသန့်၏သမီး ဒေါ်အေးအေးသန့်၊ သမက် ၊ မြေးဖြစ်သူ ဦးသန့်မြင့်ဦးတို့အပါအ၀င် မိသားစုဝင်များက ကြိုဆိုခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဘန်ကီမွန်းက အာရှတိုက်၏ ပထမဆုံး ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်သော ဦးသန့်၏အုတ်ဂူကို ဂုဏ်ပြုပန်းခြင်းချကာ ဂါရ၀ပြုခဲ့သည်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံသားကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်သည် မိသားစုဝင်များနှင့် နှုတ်ဆက်ခြင်း၊ ဂါရ၀ပြုခြင်း၊ အုတ်ဂူကိုလှည့်လှည်ကြည့်ရှုခြင်းတို့ကို ၁၅ မိနစ်ခန့်ပြုလုပ်ပြီး လာရောက်ကြည့်ရှုသော ပရိသတ်များကိုနှုတ်ဆက်ကာ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသည်။ ၎င်းသည် ဧပြီ ၃၀ တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်တော်စုလွှတ်တော်တွင်လည်း မိန့်ခွန်းပြောကြားမည်ဖြစ်သည်။ (ဓာတ်ပုံ- ဘိုဘိုဝင်း)
source:7 Day News Journal
ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု အဖွဲ့ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းမည်
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့်တစ်ဖွဲ့ဖြင့်သာ ဆွေးနွေးသွားနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်ချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု အဖွဲ့ကို ပြန်လည် ဖွဲ့စည်း သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော်ရှိ စက်မှု ၂ ဝန်ကြီးဌာနရုံးတွင် ယနေ့ ၁ နာရီ၌ ပြုလုပ်သော သတင်းမီဒီယာ သမားများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ၌ ရထား ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု အဖွဲ့ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းရာတွင် အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးများ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် နယ်မြေခံ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ်မှ တပ်မတော်သားများ ဖြင့် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
အရပ်သား အစိုးရလက်ထက်၌ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု အဖွဲ့သည် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း ဆယ်ဖွဲ့နှင့် အပစ်ခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ပြီး KIA လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုတည်းသာ ကျန်တော့ကြောင်း အဆိုပါ ပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ By: The Voice Weekly Read More
ဒီမိုကရေစီ အလေ့အကျင့်တွင် အစိုးရအဖွဲ့ ၀င်များ အပြောင်းအလဲ ရှိတတ်သည့်
ဒီမိုကရေစီ အလေ့အကျင့်တွင် အစိုးရအဖွဲ့ ၀င်များ အပြောင်းအလဲ ရှိတတ်သည့် သဘောသဘာဝရှိကြောင်း စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အပြောင်းအလဲ ရှိသည်ဆိုသော သတင်းများထွက်ပေါ် နေခြင်းမှာ မှန်ကန်ပါသလား ဆိုသော The Voice Weekly ၏ မေးမြန်းချက်အပေါ် ယင်းသို့ပြန်လည်ဖြေ ကြားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါအပြင် စီးပွားရေး ဗီဇာအား ဆိုက်ရောက် ဗီဇာ အဖြစ် ဂျွန်လ ၁ရက်နေ့မှ စတင်၍ ပေးအပ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အား ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက နေပြည်တော်ရှိ စက်မှု ၂ ဝန်ကြီးဌာနရုံးတွင် ယနေ့ ၁နာရီ၌ ပြုလုပ်သော သတင်းမီဒီယာ သမားများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဗီဇာသည် မြန်မာပြည်တွင် နေထိုင်ခွင့် ရက် ၇၀ ရရှိမည် ဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ ၄၀ ကျသင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ခရီးသွားဗီဇာအား ဆိုက်ရောက် ဗီဇာ အဖြစ် ထုတ်ပေးရန် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများနှင့် ညှိနှိုင်းနေဆဲဖြစ်ပြီး အာဆီယံ နိုင်ငံ အားလုံး ကို ဗီဇာ အမျိုးစား အားလုံးအတွက် ဆိုက်ရောက် ဗီဇာ ထုတ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ The Voice Weekly နေပြည်တော်ရှိ စက်မှု ၂ ဝန်ကြီးဌာန ရုံးတွင် ယနေ့နေ့လည် ၁ နာရီက ပြုလုပ်သော သတင်း မီဒီယာသမားများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ
ဦးဖြိုးဇေယျာသော်၊ဒေါ်စန္ဒာမင်း၊ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့်ဦးလင်းလင်း တို့လေးဦးကို မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်တွင် တွေ့ရစဉ်ဒီ/ချုပ်ပါတီမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်သစ် သုံးဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်စန္ဒာမင်း၊ ဦးဖြိုးမင်း သိန်း၊ ဦးဖြိုးဇေယျာသော် (ဇေယျာသော်)နဲ့ တေးသံရှင် လင်းလင်းတို့ လေးဦးဟာ ဒီနေ့ နံနက် ၉း၃ဝ နာရီ တွင် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှ သြစတေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီမြို့သို့ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။
သြစတေးလျ နိုင်ငံမှာ လက်ရှိအာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့ လေဘာပါတီက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သို့ ကမ်းလှမ်း ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ် (University of Sydney’s Graduate School of Government) မှာ ဧပြီလ ၃ဝ မှ မေလ ၄ ရက်နေ့အထိ ဒီ/ချုပ်ပါတီ ဝင်လေးဦးဟာ နိုင်ငံရေးနှင့် မူဝါဒရေးဆိုင်ရာ အကြံပေး သင်တန်းကို တက်ရောက် သင်ကြားလေ့လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
““ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ကို အမြန်ဆုံးပြန်လာမယ်လို့ ပုဗ္ဗသီရိက မဲဆန္ဒရှင် များကို ပြောခဲ့ပါရစေ”” လို့ ဦးဖြိုးဇေယျာသော်က မထွက်ခွါမီ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှာ မြန်မာအင်ဒီပဲန်ဒင့်ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဧပြီလ ၁ ရက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်မှာ အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ဦးဖြိုးဇေယျာသော်ဟာ ပုဗ္ဗသီရိကို လွမ်းဆွတ်နေပုံရပါတယ်။
ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန္ဒာမင်းကတော့ ““ ဒီခရီးစဉ်ဟာ သြစတေးလျ လေဘာပါတီနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အကြား ပထမဆုံး ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်ပါ””လို့ မြန်မာအင်ဒီပဲန်ဒင့်ကို မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှာ ပြောကြားခဲ့တာပါ။
ပြည်ပသို့ ထွက်ခွါမယ့်သူများရော ပို့ဆောင်သူများပါ ပြည့်နက်နေတဲ့ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ် ထွက်ခွါခန်းမအတွင်းမှာ ဦးဋ္ဌေးကြွယ်ရဲ့ညီမဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်မိမိကြွယ်ကိုလည်း သူ့ရဲ့ခင်ပွန်း ဦးဖြိုးမင်းသိန်း အနီးမှာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ““ဒီခရီးစဉ်ဟာ ပါတီချင်း ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်း ရည်ရွယ်ပါတယ်””လို့ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း က သတင်းထောက်များကို ပြောကြားခဲ့တာပါ။ ပါတီ နှစ်ခုကြား ဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း ဦးဖြိုးဇေယျာသော်က ““အခုချိန်မှာ ပါတီနှစ်ခုကြား ဆက်ဆံရေး ပိုမိုခိုင်မြဲနေပါတယ်၊ သင်တန်းတင်မက လေဘာဌာနချုပ် လေ့လာဖို့၊ ပါလီမန် အတွင်း လေ့လာဖို့တို့ ပါလာတော့ ပိုမိုခိုင်မြဲတဲ့သဘော ပိုဆောင်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်””ဟု ဖြည့်စွက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းတို့ လေးဦးဟာ မြို့တော်ကင်ဘာရာသို့လည်း သွားရောက်မှာဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးကို အမြဲ ထောက်ခံခဲ့တဲ့ သြစတေးလျမှ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပါလီမန်အတွင်း တွေ့ဆုံခြင်း၊ ဝန်ကြီးအချို့နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့ စည်းဝေးပွဲများ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာ အရ အသုံးငွေစာရင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ ပါလီမန်အစည်းအဝေးတို့ကို လေ့လာခြင်းများပြုလုပ်မှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် လေဘာပါတီဌာနချုပ်သို့လည်း သွားရောက် လည်ပတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီခရီးစဉ်မှာ ပါသွားတဲ့ တေးရေး၊ တေးဆို လင်းလင်းမှာ မြန်မာ့ရော့ခ်ဂီတ စင်မြင့်မှာ အောင်မြင်စွာ နေရာယူထားနိုင်သူများထဲမှ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး စည်းရုံးလှုပ်ရှားသူများထဲမှာ ထင်ရှားသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်ကို နောက်တွင် စည်းထားပြီး သပ်ရပ်သော ဝတ်စုံနှင့် လင်းလင်းမှာ တွေ့မြင်နေကြထက် ပိုမိုပြည့်စုံစွာ ရှိနေပြီး မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်ဝင်းအတွင်းမှာ လူအများ၏အာရုံကို ဖမ်းစားထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ““ကျွန်တော် လူမှန်းသိစ ကတည်းက ပေါ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေး အသိ၊ နိုင်ငံရေး စိတ်၊ နိုင်ငံရေး အမြင်နဲ့ပဲ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် ဂီတနဲ့ နိုင်ငံရေးကို တွဲပြီး လုပ်ပါ့မယ်”” လို့ သူရဲ့ အနာဂတ်ရွေးချယ်မှုအတွက် မေးခွန်းကို မြန်မာအင်ဒီပဲန်ဒင့်ကို ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုကျော်အတွင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ခရီးကြမ်းလမ်းရှည်ကြီးကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ အရုဏ်ဦးရောင်ခြည်နဲ့အတူ နိုင်ငံတကာသို့ ခြေလှမ်းများ စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ/ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်လည်း လာမယ့်ဇွန်လအတွင်းမှာ နော်ဝေးနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံများကို အလည်အပတ်သွားရောက်ဖို့ ရှိပါတယ်။
၎င်းတို့ လေးဦးဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို မေလ ၉ ရက်နေ့မှာ ပြန်လည်ရောက်ရှိမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘမ်ကီမွန်း နေပြည်တော် မသွားခင် ဦးသန့် ဂူဗိမာန်ကို သွားရောက် ဂါရ၀ပြု (ရုပ်/သံ)
နေပြည်တော် မသွားခင် ဦးသန့် ဂူဗိမာန်ကို သွားရောက် ဂါရ၀ပြု ..မြန်မာ့ပြောင်းလဲရေးအတွက် ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ ဘမ်ကီမွန်း ။
"His ( U Thant) concept of one world at the height of the cold war is exactly what we are now trying to achieve. This world has become so interdependent." BAN KI-MOON
ဂျာမန် နုိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သွားရောက်တွေ့ဆုံ (ရုပ်/သံ)
"I do not think that you can say that this process is irreversible until suchatime as you can be sure that all those who are in positions of power, including in army, is firmly behind this." (Daw Aung San Suu Kyi)
၂၉ ဧပြီ ၂၀၁၂။ ဂျာမနီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် လာရောက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပြီးပူးတွဲ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက ရောက်ရှိလာတဲ့ ဂျာမန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Guido Westerwelle ဟာNLD ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်မှာ သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး EU ဥရောပ သမဂ္ဂရဲ့ရပ်တည်ချက်၊ သဘောထားတွေကို ဆွေးနွေးကြောင်း သိရပါတယ်။
ဂျာမန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း ပထမဦးဆုံးအကြိမ် လာရောက်တဲ့ ခရီးစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ NLD ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဟန်သာမြင့်က ပြောပါတယ်။
ဂျာမန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Guido Westerwelle ဟာ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စာမျက်နှာသစ် ဖွင့်ဖို့ အာရှခရီးကို ထွက်လာရင်း အခုလို မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ကြီးဟာ မနက်ဖြန် နေပြည်တော်ကို သွားရောက်ပြီး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို အကူအညီ အများဆုံးပေးတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာ ဂျပန်နိုင်ငံပြီးရင် ဂျာမနီနိုင်ငံက ဒုတိယနေရာမှာရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံက ကြွေးမြီ ယူရိုငွေသန်း (၇၀၀) ကျော် တင်ရှိနေကြောင်း သိရပါတယ်။
(ဓာတ်ပုံ- AFP: ဂျာမန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Guido Westerwelleနှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအပြီး သတင်းထောက်များကို စကားပြောဆိုနေကြစဉ်။) Read More
UN အတွင်းရေးမှူးချူပ် ဘန်ကီမွန်း မြန်မာနိုင်ငံရောက်ရှိလာ
UN အတွင်းရေးမှူးချူပ် ဘန်ကီမွန်း မြန်မာနိုင်ငံရောက်ရှိလာစဉ် ရိုက်တာသတင်းဌာနမှာ (ရုပ်/သံ)မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမစ္စတာဘန်ကီမွန်းသည် မနက်ဖြန် လွှတ်တော်တွင်ပြောကြားသွားမည့် ယင်း၏မိန့်ခွန်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှု့များဆက်လက်ထားရှိနေသော နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှု့များပယ် ဖျက်ပေးရန်၊ရွေ့ဆိုင်းပေးရန်တိုက်တွန်းသွားမည်ဟုယနေ့ညဦးပိုင်းက နေပြည်တော်မြတ်တော်ဝင်ဟိုတယ်တွင်ပြည်တွင်းမီဒီ ယာအချို့နှင့်သီးသန့်တွေ့ဆုံစဉ်ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
YANGON (Reuters) - European firms seeking to invest in Myanmar are unlikely to rush into business deals until more concrete reforms are put in place, despiteasuspension of economic sanctions by the EU, its foreign policy chief Catherine Ashton said on Saturday. The European Union and other powers have moved in recent weeks to ease sanctions on Myanmar, as the once pariah nation embarks on landmark reforms and seeks engagement with the world. Speaking on her first visit to the former British colony, Ashton said punitive measures could be lifted fully before their next scheduled review inayear's time but only if all 27 EU members were convinced Myanmar's overhaul "cannot go backwards". "There'salot of delegations that have been here with business leaders very interested in what can be done here but they'll make their judgments like us," Ashton told Reuters in an interview during the EU's most high-profile visit to Myanmar since the military ceded powerayear ago. "The suspension is important for them, but they'll make their business decisions based on what they see on the ground. Companies need the rule of law to exist. They need to know that if they invest in this economy, it will be well looked after and secured. They want stability andaworkforce that is trained." European companies have lobbied aggressively as they seek to tap one of Asia's last frontier markets. Firms from Asian powers like Japan, China, India, South Korea, Singapore and Thailand are already preparing to enter Myanmar's mining, energy, tourism, telecoms and manufacturing sectors. Ashton said key targets to be met forafull lifting of sanctions would include freeing all remaining political prisoners, an inclusive political climate and permanent solutions to conflicts with ethnic minority rebels. "They need to keep up the momentum and look at releasing all political prisoners. It's about trying to makes sure that after ceasefires, people can go home, that there'sarole for them in the economy ... they can feel their own identity but also part of the country," she said. Continued... Sources : Read More
(Reuters) - Myanmar will overhaul its peace negotiating teams inabid to settle festering armed rebellions with ethnic rebel militias following its failure to endastubborn conflict in the country's strategic Kachin State, sources said on Sunday. President Thein Sein is planning to restructure the teams afterafailure to makeabreakthrough in six rounds of talks with Kachin rebels and their political leaders. Fighting between troops and militias has displaced more than 50,000 people since last June, two sources close to the peace effort told Reuters.
The reformist president, who appealed to dozens of ethnic groups in August to start talks, would bring inavice president, parliamentarians, and top military figures as part of his three-stage plan for "everlasting peace" inacountry plagued by decades of ethnic unrest.
"The two teams set up last year will be combined into one and the new team will comprise many members including senior army officers, parliamentary law makers and state chief ministers and will be ledavice president," one source said, requesting anonymity because the issue was highly sensitive.
The need for permanent political deals with the rebels has been pushed by Western powers asapriority for stability and economic development. Preliminary ceasefires have already been agreed with aboutadozen political organisations or armies.
One of the biggest groups, the Karen National Union (KNU), which waged one of the world's longest-running insurgencies until recently, began talks towardsapolitical agreement earlier this month.
The substance of those talks is expected to be grantingadegree of autonomy if they agree to form political parties.
It was not known exactly who would be brought in or replaced, the sources said. The two teams are led by Rail Transportation Minister Aung Min and Aung Thaung,aheavyweight in the ruling Union Solidarity and Development Party (USDP) and former Industry Minister.
Analysts and diplomats say Aung Min's group has managed to win the trust of sceptical rebel groups and enjoyed far more success than the team led by Aung Thaung, who is consideredahardliner from the authoritarian military regime that ruled Myanmar until last year.
Aung Thaung's team has been in talks with the Kachin Independence Army and its political wing, the Kachin Independence Organisation, but the dialogue towardsaceasefire in the murky conflict has been fruitless.
The international community has repeatedly called for restraint on both sides, while rights groups say the military, which President Thein Sein has instructed not to attack the KIA, has committedalitany of rights abuses, including rape, forced labour and extrajudicial killings.
The KIA is one of the most powerful ethnic armies. The Kachin State is also crucial to Myanmar's economic interests, home to hydropower plants and from next year, twin gas and oil pipelines from the Bay of Bengal being built to feed China's growing energy needs.
(Writing by Martin Petty; Editing by Jonathan Thatcher)Sources:
SOLUTIONS SOUGHT TO MANAGE TRAFFICKING OF ROHINGYA
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ စိမ်းလဲ့ ကန်သာ အစိုးရဧည့်ဂေဟာမှာ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်
နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်အား စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီမှ ၂ နာရီ ၁၇ မိနစ်အထိ သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး ပူးတွဲ သတင်းထုတ်ပြန်ရာမှာ ဥပဒေနဲ့အညီ မှတ်ပုံတင်ပြီးပါက အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) နဲ့အတူ လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့ ကြိုဆိုလျှက်ရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည် က သတင်းစာ ဆရာတစ်ဦးရဲ့ မေးမြန်းချက် ကို ဖြေကြားပါတယ်။
အဲဒီ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ရိုက်တာ သတင်းဌာနက ဦးအောင်သန်းထွန်းက “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါလီမန်ထဲကို ဝင်လာဖို့ နည်းစနစ် (Technically) အရ အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ အစိုးရဖက်က အဲဒါကို အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါသလား” လို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကို မေးမြန်းခဲ့တာပါ။ အဲဒါအပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို မှတ်ပုံတင်ပြီး လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲအမှီ ဝင်ဖို့ရှိပါသလား၊ ကိုယ်တိုင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ရှိပါသလားလို့ ဆက်လက် မေးမြန်းပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “ကျွန်မတို့က ရွေးကောက်ပွဲကို မူအရ ဆန့်ကျင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ လက်ခံထားပြီးသားပါ။ ဒီလို ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပုံဝင်နည်း အခြေအနေ၊ အခင်းအကျင်းတွေကိုပဲ ကျွန်မတို့က ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပြန်လည် ဖြေကြားပါတယ်။ အဲဒါအပြင် ၎င်းရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ဖို့အတွက် ကိစ္စမှာ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို တင်ပြရဦးမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ အဲဒီလို တင်ပြပြီးမှသာ ဘယ်လိုဖြေရမယ်ဆိုတာ သိမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဦးအောင်ကြည် နဲ့ လေးကြိမ်မြောက်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပြီး နောက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ဖို့ ဖြစ်လာတာပါ။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ တောင်းဆိုတဲ့အချက်တွေကို ဦးအောင်ကြည်က အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဲ့ ညှိတဲ့ကိစ္စမှာ လွှတ်တော် နှစ်ရပ်စလုံးက သေသေချာချာ မလေ့လာဘဲ လက်ခံပေးလိုက်တဲ့ ကိစ္စမှာ ကျမ်းကျိန်တာပြင်ပေးတာလဲပါတယ်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ တောင်းဆိုတဲ့အချက်တွေလိုက်လျောပေးရာ မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးအဖွဲ့ တဖက်ထဲက လိုက်လျောပေးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ အဲ့ဒီကိစ္စကို ဦးအောင်ကြည်က အမျိုးသား လွှတ်တော်နဲ့ညှိ၊ အမျိုးသား လွှတ်တော် ကအတည်ပြု့ပေးပြီး ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ထပ်စိစစ်အတည်ပြု့ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်မှတ်တမ်းမှာပါ ပါလာမှာဖြစ်လို့တရားဝင်မဝင်စဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) က ဥပဒေကြောင်းအရ မလိမ့်တပါတ်လုပ်ထားတဲ့ ပြည့်ခိုင်ဖြိုးအစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်ကို ရစ်နေတာပါ။
ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို အဲ့ဒီကိစ္စ မေးတဲ့ video clip တခုမှာဒေါ်စုက ဒါ ဥပဒေကြောင်းအရ issue ၊ ဥပဒေပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ ဦးဥာဏ်ဝင်းနဲ့ပိုဆိုင်တယ်၊ ၊ဦးဥာဏ်ဝင်း ကိုမေးပါလို့ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံး နဲ့ ပြောသွားတာကို တွေ့ ရမှာပါ NLD လွှတ်တော်မတက်တဲ့ပြသာနာ ရဲ့ rootcause က စကားလုံးဆိုင်ရာ ပြဿနာမဟုတ်ဘူး၊ ပြင်ပေးပါမယ်လို့ လွှတ်တော် နှစ်ရပ်စလုံးက တရားဝင်လက်ခံပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စကို မပြင်ပေးနိုင်တော့လို့ ဥပဒေကြောင်း အရ ထောက်တာပါ။
ဥပဒေပြု့မဏ္ဍိုင်လွှတ်တော်ရဲ့ ပြီးစလွယ်တရားဝင်အတည်ပြု့လိုက်တဲ့အမှားကိုထောက်တာ။ လွှတ်တော် နှစ်ရပ်စလုံးက တရားဝင်လက်ခံပေးလိုက်တာ တရားဝင်ဖြစ်လို့ Rule of law အပိုင်းနဲ့လဲဆိုင်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့နံနက် ၉ နာရီခွဲမှာ အီတလီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Giulio Terzi di Sant' Agata နှင့် တစ်နာရီကျော်ကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက် ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ----
ဖွဲ့စည်းပုံတွင်ပါရှိသော စကားလုံးများ တသမတ်တည်း မဖြစ်သည့်အခက်အခဲဖြစ်ကြောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၏ အစီအစဉ်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ စသည် တို့တွင်ပါရှိသည့် စကားလုံးများမညီညွတ်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ပါတီက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် မပါဝင်ခဲ့သည့်အကြောင်းရင်းများထဲမှာ ယခုစကားလုံး၏ ပြဿနာသည် အဓိကပြဿနာတစ်ခု အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်ဟုလည်း ပြောကြားသွားပါတယ်။၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေတွင်ပါရှိသည့် အခြေခံဥပဒေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရ မည်ဟု ပါသောကြောင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီက ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပြီးနောက် အဆိုပါစာသားသည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၏ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ကျမ်းကျိန်ရ မည့်စာသားတွင်ပါရှိနေသေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယခုပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီး သူမတို့သည် သမ္မတ၏ ရိုးသားသောသဘောထား အပြုအမူများကြောင့် ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်။ သမ္မတက မြန်မာနိုင်ငံကို တိုးတက်သော ချမ်းသာသောနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေသော ရလဒ်များကို ယုံကြည်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေဖြင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများတွင် သမ္မတနှင့်အတူတွဲ၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု လည်းပြောကြားခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို သေချာမသိဘဲနဲ့ သတင်းဌာနတွေ၊ နိုင်ငံရေးပရောဟိတ်ကြီးတွေ၊ even လွတ်တော်အမတ်တွေအများစုက အစ NLD လွှတ်တော်မတက်တဲ့ပြဿနာ ရဲ့root cause ဖြစ်တဲ့ " ပြင်ပေးပါမယ်လို့ လွှတ်တော် နှစ်ရပ်စလုံးက တရားဝင်လက်ခံပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စ ကို မပြင်ပေးနိုင်တော့လို့ ဥပဒေကြောင်းအရ ထောက်တာ " ကို နားမလည်၊ မမြင်နိုင်ဘဲ၊ကျမ်းကျိန်တဲ့စကားလုံးဆိုင်ရာ ပြဿနာလို့ဆိုပြီးပြောဆိုနေကြတာ ဟာ နိုင်ငံရေးကို ပိုပြီး ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဒီကိစ္စ မှာ NLD နဲ့ အစိုးရကြား ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းမှုတွေကို စောင့်ကြည့်ကြပါဦးလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခြားရေးရာဌာနအကြီးအကဲ Ms.Catherine Ashton နှင့်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့သည် ယနေ့ ဧပြီလ ၂၈ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက အမျိုးသားဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ယင်းတွေ့ဆုံမှုတွင် အီးယူ နိုင်ငံခြားရေးရာအကြီးအကဲမှာ မိမိအနေဖြင့် မြန်မာနိုင် ငံသို့ လာရောက်ခဲ့ရာတွင် သတင်းအချက်အလက် ၃ခုယူဆောင်လာခဲ့ကြောင်း ၊ ယင်းတို့မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ် လျှက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးတိုးတက်မှုများကိုလက်ခံကြောင်း၊ ယင်းနိုင်ငံရေးတိုးတက်မှုများဆက် လက်ပေါ်ပေါက်နိုင်အောင် ဥရောပသမဂ္ဂအနေဖြင့် ဆက်လက်ကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ်ယခုထက်ယုံကြည်မှုရရှိရန် မြန်မာပြည်သူများနှင့် ပူးပေါင်းလက်တွဲ လုပ်ကိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြော ကြားခဲ့သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယူရိုငွေသန်း၁၅၀နှင့်အတူ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင်အ ကူအညီပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့၏ရုံးခွဲကို အဆိုပါနေ့ နေ့လယ် ၃ နာရီတွင် အင်းယားမြိုင်လမ်း အမှတ် ၄၅ တွင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ Source : Popular Myanmar News Journal
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အီးယူ ဥရောပသမဂ္ဂဆိုင်ရာရုံးကို ဒီကနေ့ စနေနေ့မှာ တရားဝင် ဖွင့်လှစ်မယ်လို့ အီးယူ နိုင်ငံခြားရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒရုံး အကြီးအကဲ Catherine Ashton က မနေ့က မြန်မာပြည်ကို မထွက်ခွာခင်မှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အီးယူ နိုင်ငံခြားရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒရုံးအကြီးအကဲ Catherine Ashton ဖြစ်ပါသည်။
ဘရူးနိုင်း နိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာလာတဲ့ Catherine Ashton ဟာ ဒီကနေ့ မြန်မာပြည်ကို လေယာဉ်နဲ့ ဆိုက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီး သူကိုယ်တိုင် အီးယူ ရုံးခန်းကို ဖွင့်လှစ်မှာပါ။ အခုလို ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်လိုက်တာဟာ ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို အပြည့်အ၀ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် ပထမခြေလှမ်း ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
အီးယူရဲ့ သမိုင်းတွင်တဲ့ အပြောင်းအလဲအဖြစ် ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲ လက်နက် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကလွဲလို့ မြန်မာအပေါ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုတစ်နှစ်ဆိုင်းငံလိုက်ပါတယ်။
အီးယူရဲ့ ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေကို လုံးဝရုပ်သိမ်းဖို့ ဆိုရင် မြန်မာအနေနဲ့ ဒီထက်မက အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ဖို့ လိုကြောင်း အီးယူ နိုင်ငံခြားရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒရုံးအကြီးအကဲ Catherine Ashton က ပြောသွားပါတယ်။ RFA Read More
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး NLD ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်တွေကို တိုင်းရင်းသားနဲ့ ဒီမိုကရေစီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကိုယ်စား ရခိုင်အမျိုးသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအေးမောင်က လာမဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ သွားရောက် တွေ့ဆုံမယ်လို့ သိရပါတယ်။NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေ လွှတ်တော်တွင်း အမြန်ဆုံး ပါဝင်လာရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့ အနေနဲ့ အခုလို သွားရောက်တွေ့ဆုံဖို့ စီစဉ် တာဖြစ်တယ်လို့ ဒေါက်တာအေးမောင်က ပြောပါတယ်။
ဘယ်တော့မှ ဒူးထောက်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အီတလီနိုင်ငံခြားရေးဝန်းကြီး တွေ့ဆုံ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ ပျော့ပြောင်းပေမယ့် ဘယ်တော့မှ ဒူးထောက်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဧပြီလ၂၆ ရက်နေ့က ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း နေအိမ်မှာ အီတလီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ဂျူလီယို တာဇီ ဒီ ဆန် အဂါဒါMr. Giuliomaria TERZI DI SANT’ AGATA နဲ့ တွေ့ဆုံအပြီး ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ မှာ သူက အခုလို ပြောဆို လိုက်တာပါ။ ဒါ့အပြင် NLDလွှတ်တော် တက်ရေး မတက်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံရေး ကိစ္စအနေနဲ့မချဲ့ကားစေချင်ကြောင်းသူ့အနေနဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုယုံကြည်ကြောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအီတလီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ဂျူလီယို တာဇီကလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ရပ်တန့် မသွားစေလိုကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ၅ ဦး အနားပေး လိုက်ပြီ
မနှစ်က တရုတ်ပြည် ရှန်ဟိုင်းရောက် ဗိုလ်ကျော်ဆန်း
၁။ ဦးကျော်ဆန်း (ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး) ၂။ ဦးတင့်ဆန်း (မြန်မာ့ဟော်တယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး နှင့် အားကစားဝန်ကြီး) ယခုနှစ် ၆လပိုင်းက တရုတ်ပြည်ရောက် ဧရာဝတီ လျှပ်စစ်ပရော်ဖက်ဆာ ဦးဇော်မင်း ၃။ ဦးဇော်မင်း (အမှတ် ၁လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး) ၄။ ဦးဝင်းမြင့် (စီးပွားကူးသန်း ဝန်ကြီး) ၅။ ဦးကျော်စွာခိုင် .. (အမှတ် (၁) စက်မှုဝန်ကြီး) တို့အား ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးများ ဘ၀မှ အနားပေး လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း သမ္မတရုံးမှ လာသည့် သတင်းများအရ သိရပါ သည်။ သတင်း --- ဒီမိုဝေယံ
ထားဝယ် စီမံကိန်း ဂျပန် ၀င်ရောက်မည်
ထားဝယ် အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းတစ်နေရာကို တွေ့ရစဉ် (Photo-Google Images)
ထားဝယ် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း အတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်ကူညီနိုင်ရန်
ဂျပန်-ထိုင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့ ပါဝင်သော သုံးနိုင်ငံ ပူးပေါင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ထူထောင်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း အီတလျံ-ထိုင်း ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ ပရီချိုင်း က ပြောကြားသည်။
ထိုင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့ အဓိက ပူးတွဲ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော ယင်းစီမံကိန်းကို ချေးငွေ ဆက်လက် ထောက်ပံ့ရန် ဂျပန် အစိုးရက သဘောတူထားပြီးဖြစ်ကြောင်း Bangkok Post သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
"နှစ်ရှည်ချေးငွေအတွက် သဘောတူချက်ကို ဒီနှစ်အကုန် အပြီးသတ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်"ဟု ယင်းက ဆိုသည်။
ကုမ္ပဏီ အနေနှင့် ယင်း၏ ရေရှည် ဘဏ္ဍာရေး အစီအစဉ်ကို ယခုနှစ်ကုန်တွင် အပြီးသတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့ ရိုက်တာ သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
"ဂျပန် ၀င်လာမယ်ဆိုတော့ ၀မ်းသာနေကြတယ်။ ထိုင်းလုပ်တာထက်စာရင်တော့ သာမယ်။ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ဂျပန်တွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်"ဟု စီမံကိန်း တည်ဆောက်လျက်ရှိသည့် နဘုလယ်ဒေသမှ အသက် ၄၀ အရွယ် ဒေသခံ တစ်ဦးက The Voice Weekly သို့ ပြောကြားသည်။
ထားဝယ်စီမံကိန်း လုပ်ကိုင်ရန် Max Myanmar နှင့် အီတလျံ-ထိုင်း ကုမ္ပဏီတို့ ပါဝင်သော ထားဝယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကုမ္ပဏီ (DDC) ကို တည်ထောင်ထားသည်။
ပြည်တွင်းရှိ အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်း အချို့တွင် ကိုရီးယား နိုင်ငံမှ လာရောက် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသွားရန် ရှိ
ကိုရီးယား စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အေဂျင်စီ Kotra မှ တာဝန်ရှိသူရဲ့ ပြောကြားချက် အရ ကိုရီးယား နိုင်ငံမှ အထည်ချုပ် စက်ရုံများ၊
Electronic ပစ္စည်းများ တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း စက်ရုံများ၊ တာယာ စက်ရုံများနဲ့ သတ္တု တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်း တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက် စီးပွားရေး အရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သွားဖို့ သေချာ သလောက် ရှိနေပြီ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ဆောင်ရွက် ရာမှာ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းမှာ စက်ရုံ ၁၀ ရုံခန့်၊ Electronic ပစ္စည်းများ တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း များမှာ စက်ရုံ ၃ ရုံခန့်နဲ့ ပြည်တွင်း တာယာ စက်ရုံများမှာပါ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ရှိတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သတ္တုတွင်း တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းမှာ လုပ်ကိုင်ဖို့ အတွက် ကိုလည်း ကိုရီးယား နိုင်ငံမှ Korea Resource Coporation(Kores) မှ တာဝန်ရှိ သူများဟာ သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီး ဌာနနဲ့ တွေ့ဆုံမှုများ ပြုလုပ်ပြီး ပြည်တွင်းမှာ ကွင်းဆင်း တိုင်းတာရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင် နေပြီ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုရီးယား နိုင်ငံမှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ အတွက် ယခုလ အတွင်းမှာ နေပြည်တော်မှ တာဝန်ရှိသူ များနဲ့လည်း တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
TowardsaSustainable Peace: Demilitarization and Nonviolence in Burma
How can we best supportatransition towards full reform in Burma? How might we best support human rights there? Isn't the first stepafull freedom from fear that necessitates an elimination of the eminent threat of violence? The answers may not be simple, but there are certain steps that are. Tom Andrews' recent articles in the Washington Post (here) and The Hill (here) call foracontinuance of sanctions against Burma/Myanmar. He sees the maintenance of sanctions as an important tool to continue the reform process. I'm tended to think that Daw Aung San Suu Kyi hasamore authoritative voice with which to speak on the issue of sanctions, and think that if there is going to be advocacy forasolution it should focus on the provision of the needs of the victims of fighting and onacessation of violence. It is hard to overstate the degree of distrust present in Burma's central government and its minority nationalities. The violence and abuse there is tearingaregion asunder. The violence committed in northern Burma by the military is repellent and the needs of the civilian population there increase daily. While it is the Tatmadaw that initiated this latest phase of conflict in Kachin State, there isahistory of both sides failingahuman rights litmus test. Witness the persistent use of child soldiers by government and ethnic forces, including the KIA itself. Even if conflicts are resolved, there will beasustained and considerable need for rebuilding trust and respect for its diverse population (consider the Rohingya, an ethnic group that not even major advocacy organizations have defended enough and with scant coverage in the major media). Burma needs to developaconsistent application for the rule of law, to buildavirtually nonexistent infrastructure that can serve all of its peoples, to address the serious crisis in education and public health, and nearly countless other critical projects that people will suffer in the absence of having completed. None of these things can be addressed without resolving the continuing conflicts around the borders of Burma. Let us note that Daw Aung San Suu Kyi has endorsed the suspension of sanctions by the EU and has also maintained her calls for an end to all armed hostilities and for the release of the remaining prisoners of conscience. The fact of the matter is that transition processes are often uneven, frequently feature reversals, and are always bumpy. Witness the evolution of South Africa in removing the binds of apartheid or the fitful struggles in Cambodia towards reconciliation after civil war. While it may beanecessary element of the process to maintain some sanctions until there is progress with political prisoners and other parts of the reform process, it is imperative that there beademilitarization of the conflict regions and an embrace ofanonviolent process. International observers, trusted third-party negotiators, and the validation of local interests will all need to be part of the process. But it is difficult to imagineaway forward with all sides continuing to hold weapons that can be reintroduced at any time. Burma's conflict regions must disarm and demilitarize. There is only peace in nonviolence. I have dedicated much of my life to working to advance the causes of human rights and basic dignity of all but have, as is inevitable, become attached to some particular causes within the broader concerns for justice. As the child ofavery Irish family in Pittsburgh, it was unsurprising that I became concerned by The Troubles in Northern Ireland after watching the religious-based strife that was tearing communities asunder. After the signing of the Good Friday Agreement, acrimony continued by both Unionist and Republican splinter groups and confidence-building was shaky in trying to untangleaconflict withaforty year history. I couldn't speak for all sides, but I could speak asaCatholic and asaperson of Irish ancestry and speaking out is what was necessary. On March 23, 2000, the International Herald Tribune published my call for there to be no funds for armed struggle and no support for violent struggle (a reprint can be found on the HRAC blog or here). The time for deciding who was "most wrong" was over. The only way to proceed was for both sides to disarm asanecessary step, the first step and not the last, in confidence-building. Is it really impossible to propose an observed and sanctioned move towards nonviolence in Burma? Northern Ireland still has flare-ups and problems and the issues facing Burma are ofamuch greater magnitude. But I still remain firm in my conviction that there can beaconspiracy of hope andamove towardsapolitics of peace. Sources:
A Myanmar boy walks pastapile of wooden logs in Yangon on April 19, 2012. The Asian Development Bank (ADB) said on Friday it was prepared to resume giving financial aid to Myanmar aftera24-year suspension, but only once the government repaid nearly US$500 million (S$620 million) in debt. -- PHOTO: AFP MANILA (AFP) - The Asian Development Bank (ADB) said on Friday it was prepared to resume giving financial aid to Myanmar aftera24-year suspension, but only once the government repaid nearly US$500 million (S$620 million) in debt. ADB president Haruhiko Kuroda said the Manila-based multilateral institution was ready to help the formerly junta-ruled country emerge from decades of economic quagmire, following recent significant political reforms. But Mr Kuroda said Myanmar owed the ADB US$490 million, and the newly appointed quasi-civilian government must repay the money before any new financial assistance could be extended. 'At this stage, that is one big hurdle... to restart financial assistance to Myanmar because the government has accumulated arrears vis-a-vis ADB, the World Bank and other bilateral donors,' Mr Kuroda told reporters. 'And that must be cleared before we can start financial assistance.' Mr Kuroda said that unlike bilateral donors, multilateral lending agencies had little wiggle room to waive off debts. 'I would like to emphasise that as far as multilaterals are concerned, we have not much flexibility,' Mr Kuroda said. But he stressed the Manila-based bank was prepared for 'constructive engagement' with the government in Myanmar, and help it revive its economy as it slowly transitions into democracy. Mr Kuroda noted that Myanmar was the fourth most populous country in South-east Asia, and this hadahuge potential labour pool that presented opportunities for investment. The country also has big reserves of untapped natural resources, Mr Kuroda said, without giving specific figures. 'The potential for the Myanmar economy is really huge,' Mr Kuroda said. 'We are hopeful that with the engagement by the international community, including ADB, the Myanmar economy can be developed rapidly and the living standards of its people can be substantially improved,' he said. Myanmar was an original member of the ADB, which has been providing soft loans and grants to the region's developing countries since its founding in 1966 inabid to help improve the lives of the poor. The ADB cut off Myanmar from aid in 1988, when the military regime violently crushedapublic uprising led by students and activists. The World Bank announced on Thursday that it would open an office in Myanmar in June. Mr Kuroda said the ADB had no plans yet to do the same, although it could happen. Read More
သူဘယ်သူလဲ (သံဃာများအား ဦးဆောင်နှိမ်နင်းခဲ့သူ)
၂၀၀၇ခုနှစ်ကသံဃာနှင့်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူများအကြမ်းဖက်နိမ်နှင်းခံခဲ့ရသည့် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး၏ မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံ များကို အင်တာနက် စာဖတ်သူများအကြား ဖြန့်ဝေလေ့ရှိသည်မှာ မဆန်းပေ။ Face Book များတွင် ပျံ့နှံ့နေသော တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးကြီး၏ ၂ ပုံတွဲ ပုံ သို့သော် ယခုအပတ် တနင်္လာနေ့ကမှ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာသည့် တပ်မတော်သားကိုယ်စား လှယ် ၅၉ ဦးတွင် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအတွင်း သံဃာများအား ဦးဆောင်နှိမ်နင်းခဲ့သူ တဦးဖြစ်သည့် ပဲခူးမြို့ အခြေစိုက် တပ်မ ၇၇ မှ ဗိုလ်မှူးကြီးတဦး ၏ ပုံကို လူမှုကွန်ရက် Face Book တွင် ဖြန့်ဝေလာရာ ရုတ်ချည်း ဆိုသကဲ့သို့ ပျံနှံ့သွားခဲ့သည်။ ယင်း ဗိုလ်မှူးကြီး ၏ လက်ရှိ လွှတ်တော်တွင်းဓာတ်ပုံ နှင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့လယ် ဆူးလေ စေတီရှေ့တွင် အမိန့်ပေးပုံကို တွဲဆက်ထားပြီး ဖြန့်ဝေလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စစ်အရာရှိကြီးသည် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအတွင်း တပ်မ ၇၇ လက်အောက်တွင် ဒု ဗိုလ်မှူးကြီးတာဝန် ထမ်းဆောင်နေပြီး ဆက်သွယ်ရေးစက်ကို ကိုင်ကာ တပ်များကို အမိန့်ပေးနေသူတဦး ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ယင်းဓာတ်ပုံနှစ်ပုံက ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေစေခဲ့ သည်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး လှုပ်ရှားမှုကို နှိမ်နင်းရန် စစ်အစိုးရဟောင်းက တပ်မ ၇၇ နှင့် တပ်မ ၆၆ တို့ကို တာဝန်ပေးခဲ့ ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် အဆိုအရ သံဃာ အပါး ၃၀ မှ ၄၀၊ အရပ်သား ၅၀ မှ ၇၀ သေဆုံးဖွယ်ရှိကြောင်း နှင့် လူ ၂၀၀ ခန့် အရိုက်အနှက်ခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး လှုပ်ရှားမှုအတွင်း ဂျပန်သတင်းထောက် ကန်ဂျီး နာဂါအိ လည်း လမ်းပေါ်တွင် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။ လွှတ်တော်တွင်း တွေ့ရသော တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးကြီး (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ) ပြီးခဲ့သည့်တနင်္လာနေ့ကကျင်းပဆဲလွှတ်တော်တွင်းရှိတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ ပြောင်းလဲခန့်ထားရာတွင် ဗိုလ်မှူးချုပ် အဆင့်ရှိသူ ၈ ဦး၊ ဗိုလ်မှူးကြီး ၁၄ ဦး၊ ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး ၃၇ တို့ဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၄၄၀ ရှိရာ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ၁၁၀ ၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်တွင် ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၂၂၄ ဦးရှိရာ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ၅၆ ဦး ပါဝင်သည်။ ယင်း တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များကို ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် က တိုက်ရိုက် ခန့်အပ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ Face Book စာမျက်နှာပေါ်တွင် အဆိုပါ ဗိုလ်မှူးကြီးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုဝေဖန်နေကြရာ သူဘယ်သူလဲဟု သိလိုနေကြသည်။ Read More
NLD အမတ်များ သြစတြေးလျသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် သွားမည်
သြစတြေးလျ လေဘာပါတီ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသည့် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ဒေါ်စန္ဒာမင်း၊ ဦးဖြိုးဇေယျာသော်နှင့် NLD လူငယ်ဖြစ်သည့် အဆိုတော်လင်းလင်းတို့ သြစတြေးလျနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင် ရုံးချုပ်တွင် ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့က လွှတ်တော် အမတ် ဦးဇေယျာသော် လွှတ်တော်တက်လျှင် ဝတ်ဆင်ရမည့် အမျိုးသား ဝတ်စုံ စမ်းသပ်ဝတ်ဆင်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - Reuters / Soe Zeya Tun) “မနက်ဖြန် စပြီး ရန်ကုန်က ထွက်မယ်။ ဒီခရီးစဉ်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က တရားဝင်စေလွှတ်တာပါ။ သြစတြေးလျ လေဘာပါတီက ဖိတ်လို့ပါ။ စုစုပေါင်း ၄ ယောက်ပါ” ဟု ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
သြစတြေးလျသို့ ရောက်ရှိစဉ် ဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ်တွင် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တခုကို ၅ ရက်ကြာ လေ့လာကြမည်ဖြစ်ပြီး သြစတြေးလျနိုင်ငံ လွှတ်တော်များသို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် သြစတြေးလျ လွှတ်တော်အမတ်များ၊ နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် တွေ့ဆုံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
NLD မှ လွှတ်တော်အမတ်တချို့ လွှတ်တော်တက်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲ သြစတြေးလျနိုင်ငံ သွားရောက်မည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရုံးသို့ တရားဝင် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“အခုအခြေအနေမှာ ကျမ်းကျိန်လွှာ အခက်အခဲကြောင့် ကျနော်တို့ လွှတ်တော် မတက်နိုင်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ခရီးသွားမယ့်သူတွေက ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်နေတော့ လွှတ်တော်ရုံးကိုတော့ တရားဝင် အကြောင်းကြားထားတယ်။ ကျနော်တို့ ခရီးသွားနေစဉ်မှာ ကျမ်းကျိန်လွှာကိစ္စ အဆင်ပြေလို့ တခြားအမတ်တွေ လွှတ်တော်တက်ကြမယ်ဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့ ခရီးလွန်နေလို့ လွှတ်တော် မတက်နိုင်တဲ့အကြောင်း ပါတီကနေ တရားဝင်ခွင့်တိုင်ပေးမှာပါ” ဟု ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ဆိုသည်။
ယင်းခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တဦးက နိုင်ငံရေးပါတီများအကြား ချစ်ကြည်ရေးရင်းနှီးမှုဆိုင်ရာ ခရီးစဉ်မျိုးဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
“ဒါက ဟိုဘက်ပါတီက ဖိတ်တယ်။ ဒီဘက်က သွားတယ်။ ချစ်ကြည်ရေးပုံစံပါပဲ” ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီတချို့မှ ပါတီဝင်များနှင့် အမတ်တချို့လည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း ဖိတ်ကြားမှုများအရ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံများသို့ တရားဝင် သွားရောက်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရှိရသည်။
NLD လွှတ်တော်အမတ်များ ဦးဆောင်သွားရောက်ကြမည့် သြစတြေးလျခရီးစဉ်သည် ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့မှ မေလ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။
ရှင်မဖြူကျွန်း နားက သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ လုပ်ကွက် ၂ ခုဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ ရေပိုင် နက်ထဲမှာ မပါ
မြန်မာ နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ နှစ်နိုင်ငံ ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားခဲ့တဲ့ St. Martin ကျွန်း မြန်မာအခေါ် ရှင်မဖြူကျွန်း နားက သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ လုပ်ကွက် ၂ ခုဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ ရေပိုင် နက်ထဲမှာ မရှိပဲ၊ မြန်မာရေပိုင်နက်ထဲမှာသာ ရှိကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ နိုင်ငံတကာ ရေပိုင်နက် တရားရုံး ITLOS က ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ လုပ်ကွက် A1 နဲ့ A3 ၂ ခုစလုံး ဟာ မြန်မာ့ရေပိုင်နက် အတွင်းမှာသာ ဖြစ်ပြီး ၂ခုပေါင်း ထွက်ရှိနိုင်တဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ပမာဏ ဟာ ကုဗပေ ၆ တရီလီယမ် ရှိပါတယ်။ အဲဒီ လုပ်ကွက် ၂ ခုစလုံးမှာ အိန္ဒိယအစိုးရပိုင် GAIL India ကုမ္ပဏီက ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ပမာဏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ A1 လုပ်ကွက်ကို ရွှေလို့အမည်ပေးထားပြီး A3 လုပ်ကွက်ကို ရွှေဖြူလို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ လာမယ့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ အဲဒီလုပ်ကွက် ၂ ခုကနေ တရက်ကို သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ကုဗပေ သန်း ၂၀၀ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်းက အဲဒီ A1 နဲ့ A3 လုပ်ကွက်နားမှာ မြန်မာ နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ ပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားပြီးစစ်ရေးအရတင်းမာလာခဲ့ရာမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ရေတပ်သင်္ဘောတွေ စေလွှတ်ခဲ့တဲ့အတွက် မြန်မာအစိုးရနဲ့ ပူးတွဲဖက်စပ်လုပ်နေတဲ့ ဒေ၀ူးကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းတွေ St. Martin ကျွန်းအနီးကနေ ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ် ရန်ကုန်မှာ ရုံးပြန်ဖွင့်တော့မည်
လာမယ့် ဇွန်လအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရုံးပြန်ဖွင့်မယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ် က ဒီကနေ့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာဌာနေကိုယ်စားလှယ်အသစ်တစ်ယောက်နဲ့အတူရုံးပြန်ဖွင့်၊၀န်ထမ်းတွေခန့်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကူညီပံ့ပိုးရေးအစီအစဉ်သစ်တစ်ရပ် ချမှတ်နိုင်အောင် လိုအပ်တဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေ စတင် ကောက်ယူစုဆောင်းမယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ် ရဲ့ အရှေ့အာရှ နဲ့ ပစိဖိတ်ဒေသ ဆိုင်ရာ ဒု ဥက္ကဋ္ဌ Pamela Cox က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာ အစိုးရ က ကမ္ဘာ့ဘဏ် နဲ့ တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေးချေစရာ ရှိနေတဲ့ အကြွေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ ဆိုတဲ့ ကိစ္စလည်း ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မိမိတို့ရဲ့ အဓိက ပန်းတိုင်က မြန်မာပြည်သူတွေကိ်ု ကူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ်၊ မြန်မာ ဟာ ပြင်ပကမ္ဘာ နဲ့ နှစ်ကာလ ကြာရှည် အဆက်ပြတ်နေတဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူထုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာပြဿနာတွေ အတွက် အစိုးရ နဲ့အတူ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ မဟာဗျူဟာ တစ်ရပ် ပြင်ဆင်နေပါတယ်၊ ဒါတွေ အပြည့်အ၀ မဆောင်ရွက်နိုင်သေးခင်မှာ အကြွေးကိစ္စ ရှင်းဖို့လိုပါတယ်လို့ Pamela Cox က ပြောဆို ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရဟာ ကမ္ဘာ့ဘဏ် ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ( ၃၉၃ ) သန်း၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB ) နဲ့ တခြားဌာနတွေအပေါ် ဒေါ်လာ သန်းငါးရာလောက် ပေးချေစရာ ရှိနေပါတယ်။ မြန်မာ အစိုးရဟာ အကြွေး မဆပ်တဲ့အတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ၁၉၈၇ ခုနှစ်ကစပြီး အစီအစဉ်တွေ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ် ရဲ့ အရှေ့အာရှ နဲ့ ပစိဖိတ်ဒေသ ဆိုင်ရာ ဒု ဥက္ကဋ္ဌ Pamela Cox ဟာ ဇွန်လအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ကို သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျှော့ချရေး၊ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးရေး စတဲ့ ကိစ္စ တွေကို စူးစိုက် ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ဆန္ဒရှိကြောင်းလည်း
ပြောဆိုပါတယ်။ RFA Burmese Read More
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ကတိပြုထားတဲ့အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှု တချက်ခြင်းအပေါ်မှာ လုပ်ရပ်တခုချင်းအလိုက် တုံ့ပြန်ကိုင်တွယ်နေတယ် လို့ နိုင်ငံခြားရေးဌာန အဆင့်မြင့်အရာရှိတဦးက ပြောပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ထွန်းမှုတွေ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်သွားရင်လည်း၊ အရေးယူမှု လျှော့ပေါ့ထားတာတွေ ချက်ခြင်းဆိုသလို ပြန်လည်တင်းကျပ်နိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ အသင့်ရှိနေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။အခုအခြေအနေအရတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ မြန်မာ လူထုအပေါ်အကူအညီတွေထိထိရောက်ရောက် ပေးနိုင်တော့မယ်လို့လည်းအမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ပြပေးပါမယ်။ မနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ အမေရိကန်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကော်မတီရဲ့ မြန်မာ့အရေး ကြားနာမှုမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစိုးရပိုင်းက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ တက်ရောက်ပြီး လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေ မျှော်မှန်းထားချက်တွေကို လွှတ်တော်တာဝန်ရှိသူတွေကို ရှင်းပြသွားတာပါ။ အထူးသဖြင့် မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ မြန်မာအပေါ် ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုတွေ ဘယ်လို ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမလဲ ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ အထက် လွှတ်တော်ကနေ အမေရိကန် အစိုးရပိုင်း တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေကို ခေါ်ယူ ကြားနာ စစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ အစိုးရပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ ကတိပြုထားတဲ့အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ထွန်းမှုတွေအပေါ်တဆင့်ပြီးတဆင့်အရေးယူမှုတွေ လျှော့ချသွားပြီး၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အရှိန်အဟုန်ကောင်းလာရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန အာရှပစိဖိတ်ဆိုင်ရာ ဒုတိယ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျိုးဆက် ယွန်းက ပြောသွားပါတယ်။ “ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီး မြန်မာနိုင်ငံအပြောင်းအလဲတွေအပေါ်မှာ အခိုင်အမာအခြေအနေတွေနဲ့ ကျနော်တို့ တုံ့ပြန် ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကုန်ပိုင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလင်တန်ရဲ့ သမိုင်းဝင် မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ် အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ကို ထောက်ခံကြောင်းနဲ့ လုပ်ရပ်တခုချင်းအပေါ်မှာ မဟာဗျူဟာကျကျ တုံ့ပြန်သွားမယ် ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ချပြခဲ့ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ပြန်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံထဲကျန်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်စစ်သည်ရုပ်အလောင်းရှာဖွေမှုတွေ ပြန်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံ တကာငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ လေ့လာအကဲဖြတ်အဖွဲ့တွေ မြန်မာနိုင်ငံသွားရောက်မယ့်ကိစ္စ ထောက်ခံ သွားမယ်ဆိုတာ ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ဇန်န၀ါရီလအတွင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၂၅၀ ကျော် ပြန်လွတ်လာတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ နှစ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဆင့် ပြန်ထားမယ်လို့ ကျနော်တို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။”
“ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ဧပြီ ၄ ရက်နေ့မှာတော့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလင်တန်က နောက်ထပ် ခြေလှမ်း အဆင့်တွေကို ကြေညာပါတယ်။ ဒီအထဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ USAID ရုံးပြန်ထားမယ်ဆိုတာနဲ့၊ UNDP ရဲ့ ပုံမှန် အစီအစဉ်လုပ်ငန်းတွေကို ထောက်ခံသွားမယ်ဆိုတာ ပါဝင်ပါတယ်။”
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ မြန်မာအပေါ် စီးပွားရေးအရ ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေကို လျှော့ချဖို့ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပေမယ့် လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့နဲ့ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အချို့အပေါ် ပစ်မှတ်ထား အရေးယူမှုတွေကိုတော့ ဆက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ လွှတ်တော်အတွင်းက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လိုလားသူတွေကိုတော့ တဦးချင်းအလိုက် အရေးယူမှုတွေကို ပြန်လည် လျှော့ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အလှည့်အပြောင်းတခုခုမှာ တင်းနိုင်လျှော့နိုင်တဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တော့ အမေရိကန် အစိုးရပိုင်းက တာဝန်ယူထားတယ်လို့ အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန နိုင်ငံရပ်ခြား ပိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ညွန်ကြားရေးမှူး Adam Szubin က ပြောပါတယ်။
“ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနဲ့ ငွေကြေး ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ နောက်ထပ်အဆင့်တွေ လှမ်းဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလင်တန်ပြောထားသလို ဒီခြေလှမ်းတွေဟာ အရေးယူမှုအားလုံးကို ရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့သဘော မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်စစ်အစိုးရရဲ့ အပေါင်းအသင်း နီးစပ်သူတွေနဲ့ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ် ပစ်မှတ်ထား အရေးယူထားမှုအချို့ ဆက်ထားရှိမှာပါ။ အရေးယူ ဒဏ်ခတ်တဲ့ ဥပဒေရဲ့ လုပ်ငန်းသဘော ဘောင်ကို ပြုသာပြင်သာအောင်လည်း လုပ်ထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေ နောက်ပြန်လှည့်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျနော်တို့မှာ အခုလို လျှော့ပေးထားတာတွေကို ပြန်လည် အရေးယူနိုင်တဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်း ရှိထားပါတယ်။”
အခုလိုအရေးယူမှုတွေ လျှော့ပေးတာဟာ မြန်မာလူထုနဲ့ မြန်မာခေါင်းဆောင်ပိုင်းထဲက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အင်အားစုတွေကို အားပေး အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန် တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ အခု အခြေအနေမှာကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ နိုင်ငံတကာကူညီရေးအဖွဲ့ USAID အနေနဲ့ မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် ထိထိရောက်ရောက် တိုက်ရိုက် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ့် အနေအထားရှိလာတယ်လို့ USAID ရဲ့ အာရှဒေသဆိုင်ရာ လက်ထောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး သံအမတ်ကြီး Nisha Biswal က ပြောပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်ကို အခုနှစ် နှောင်းပိုင်းမှာ ခန့်ထားဖို့ရှိသလို လာမယ့် နွေကျရင်တော့ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေအားလုံး ပြန်စဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်သူတွေကို တိုက်ရိုက် အကူအညီပေးနိုင်မယ့် အခြေအနေတွေ ရှိလာတော့မှာပါ။ မြန်မာ အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကို တိုက်ရိုက် ထောက်ပံ့ကူညီနိုင် မှာပါ။ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးလုပ်ငန်းတွေကို အကူအညီ ပေးနိုင်မှာပါ။
လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားတွေအပါအ၀င် လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့ အစုအဖွဲ့တွေကို ဆက်ပြီး ကူညီသွားနိုင်မှာပါ။ အစိုးရအဖွဲ့တွင်းနဲ့ အစိုးရအပြင်ဘက်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လိုလားတဲ့ အစုအဖွဲ့တွေကို ထိစပ်ကူညီသွားနိုင်မှာပါ။ အထူးသဖြင့် ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်တွေ မြင့်တက်လာဖို့ အားဖြည့် ကူညီသွားနိုင်မှာပါ။ အခြားအလှုရှင် အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေနဲ့လည်း ထိထိရောက်ရောက် ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်သွားနိုင်မှာပါ။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ အခုဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ အခြေအနေသစ်အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့၊ ဒီအကူအညီလုပ်ငန်းတွေကို ကျမတို့ ပိုပြီးတော့ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခွင့် ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။”
အခု အထက်လွှတ်တော် ကြားနာစစ်ဆေးမှုကို ဦးဆောင်ပြုလုပ်သူကတော့ အထက် လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဂျင်ဝက် ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်ကပဲ သူဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ပြီး၊ မြန်မာ အာဏာပိုင်တွေ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တွေ့ခဲ့တာပါ။ သူဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ မြန်မာအပေါ် အရေးယူ ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ရုပ်သိမ်းဖို့ လိုလားသူလို့ အများက သိကြပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ အပြောင်းအလဲကို နောက်ခံ မတူတဲ့ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးက အဓိက မောင်းနှင်နေတယ်လို့ သူက ပြောသွားပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ကူးပြောင်းဖို့ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး ကနေ ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့ နှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း အတွေ့အကြုံမတူ ကြပါဘူး။ နောက်ခံတွေ မတူညီကြပေမယ့် ဒီခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးစလုံးဟာ တိုင်းပြည်ကို ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ဖို့ အတူတကွ ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ တိုင်းပြည် အတွက် ပေးဆပ်မှုနဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိတွေကို ကျနော် လေးစားပါတယ်။”
မြန်မာ့အရေး အခုလို လွှတ်တော်ကြားနားမှုတွေဟာ အမေရိကန် လွှတ်တော်နှစ်ရပ် အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကို ဘယ်လို ဆက်ပြီး ကိုင်တွယ်မလဲ ဆိုတာ အဖြေထုတ်နိုင်အောင် သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေကို အများပြည်သူရှေ့ မေးမြန်းကြားနာတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ အရေးယူမှုတွေကို အမေရိကန်လွှတ်တော် နှစ်ရပ်ကနေ ဥပဒေအဖြစ် အတည်ပြု ပြဌာန်း ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိအားဖြင့် အမေရိကန်အစိုးရပိုင်းကနေ လွှတ်တော်နဲ့ ညှိနှိုင်းပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက်မှုအနေအထားမှာ အဲဒီ ဥပဒေပြဌာန်းချက်တွေကို တချက်ခြင်း ယာယီလျှော့ပေါ့ ဆိုင်းငံ့ပေးနေတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။
By ကိုသားညွန့်ဦး (ဗွီအိုအေ-မြန်မာပိုင်း) Read More